မယ်လိုဒီ | Myanmar Model
မယ်လိုဒီ Like this:Like Loading... 156 comments so far kabyar lay
June 11, 2008	chit sa yar lay….
June 18, 2008	I love you.your beautiful.
August 29, 2008	Are you shot sexy photo?I love your face.And lip.
October 3, 2008	loe chin tal
December 1, 2008	လုပ်ယူထားတဲ့ အမူအရာထက် တစ်ကယ်ကို … ဖြစ်တဲ့ အမူအရာကို ပိုသဘောကျတယ်..
December 28, 2008	မိုက်တယ်. ခိုက်တယ်. တွေ့ ချင်တယ်။
February 18, 2009	မိုက်လိုက်တာဗျာ။ ရှယ်ပဲ အစ်မတို့ကတော့။
April 28, 2009	အရမ်းချစ်တယ် မယ်လိုဒီရယ်
April 28, 2009	မင်းဖင်ချချင်တယ်
April 30, 2009	အမ က သိပ်လှတယ်
May 15, 2009	အရမ်းလှတယ်
May 22, 2009	အရမ်းလှ အရမ်းလှ
May 22, 2009	အစ်မကသိပ်လှတယ်ဗျာ ခင်ချင်တယ် ခင်ခွင့်ပေးပါ
May 24, 2009	You are so cute!
June 25, 2009	chit lite tar ma yae
lee soute pay par larr
July 13, 2009	အရမ်းလှပါတယ်………………….
August 19, 2009	ဖင်ချ ချင်လို့ တစ်ည ဘယ်လောက်ပေး ရမလဲ……..
အားမနာနဲ့နော် နော် နော်
October 19, 2009	very beautiful
November 13, 2009	အမစောက်ဖုတ်ထဲကိုလျှာနဲ့ လျက်ပေးချင်တယ်ကွာ
December 5, 2009	ကျနော်ကတော့ အမဖင်ကိုမချချင်ဘူး စောင့်ဖုတ်လိုးချင်တယ် အမကုန်းပေးမှာလား အပေါ်ကနေတတ်လိုးချင်တယ်။ ပုံစံအမျိုးစုံလိုးမယ် အမရဲ့
December 23, 2009	အမနဲ့အရမ်းခင်ချင်တယ်ဗျာ။ခင်လို့ရတယ်ဆိုပြန်အပ်လိုက်နော။်
December 23, 2009	ချစ်သူ kingyarzar09@gmail.com
January 20, 2010	မေလိုးတွေ
February 12, 2010	အိုးကောင်းတယ်
February 25, 2010	အမုန်းလိုးလိုက်ချင်တယ်ကွာ……..
February 25, 2010	လိုးလိုက်ရလို့ကတော့
March 23, 2010	မင်းဖင်လိုးချင်ရမလား
March 23, 2010	ကျွန်တော်လီးကိုစုတ်ပေးပါလား
May 1, 2010	ဟိုင်း အစ်မကျွန်တော်ကအစ်မရဲ့ပရိတ်သတ်ပါ အစ်မတို့လိုမင်းသမီးဖြစ်ရတာလဲမလွယ်လိုက်တာနော်
May 1, 2010	လူတွေကအဲဒီလောက်ထိတောင်ပဲနှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာပြောတတ်ကြတာပဲနော် သူတို့မှာအစ်မတွေညီမတွေရှိလိုီ့လိုပြောမယ်ဆိုင်ရင်သူတို့ခံနိူင်မှာမို့လား
July 31, 2010	လိုးချင်တာမှ မပြောနဲ့တော့မယ်လိုဒီေ၇ စောက်ဖုတ်ထဲဘယ်ပုံစံနဲ့လိုးရမှာလဲ ငါလီးကိုလည်းစုတ်ပေးအုံးနော် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လိုးပေးနိုင်တယ်
July 31, 2010	ဘက်တန်ကိုင်ပြီးဖင်ကုန်းနေတဲ့ပုံဆို အတော်ပဲလိုးကောင်းမှာ မင်းစောက်ဖုတ်အတော်ကောင်းမှာနော် ယက်ပေးရမလား ပြီးမှမင်းဖီးလာနေတဲ့အချိန်မှာ အမုန်းလိုးပစ်လိုက်မယ်
July 31, 2010	ငါလိုးမသားကောင်တွေ သူတော်ကောင်းလုပ်နေသေးတယ် သူတို့တွေရိုက်နေတာကိုကြည့်လေ ငါတို့ယာက်ျားတွေလိုးချင်အောင်တမင်ပြနေတာမမြင်ဘူးလား ဖင်ကုန်းပုံတွေချဉ်းပဲ မင်းမမြင်ဘူးလား တမင်ဆွပေးနေတာ သူတို့အဲလိုနေ၇င် ငါ့တို့လည်းလိုးချင်တာပေါ့ နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာပြောတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့အခြောက်ပေါ့
July 31, 2010	လိုးချင်လိုက်တာမယ်လိုဒီ၇ယ် တညဆိုတော်ပြီးကွာ တစ်ညလောက်လိုးပါရစေ မင်းကိုယ့်လီးကိုစွဲသွားစေ၇မယ် တစ်ညဆို၇င်
October 1, 2010	ဖြစ်ခြင်အုံးဟ မင်းသမီး လေနဲ့လုပ်ရုံနဲ့ ကလေးအယောက် ၁၀၀ လောက်ရနိုင်တယ်
October 4, 2010	ဖင်ချင်ခွင့်လေးရချင်တယ်
October 4, 2010	ဖင်ချခွင့်လေးရချင်တယ်
October 12, 2010	ပုံတွေကိုတော့သဘောကျပါတယ်…အောက်ကစာတွေတွေ့တော့မပြောတတ်တော့ဘူးဗျ
February 3, 2011	ဒီကောင်းတွေတော်တော် ယုတ်မတာပဲ သူတို့အမေကိုဒီလိုပြော ရင့်ဘယ်လိုနေမလဲ မစဉ်စားဘူး ကြည်ပြီးရင် ပြီးပြီးပေါ့ အာပေးတယ်စကားရေးတော်ပြီးပေါ့ သူများကို ပြောချင်သလိုပြောတယ် စမတတ်လိုနေမပေါ့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ japan လင်ပါသားတွေ ဖြစ်မပေါ့ နွားတွေ
May 21, 2011	ခင်မင်ခွင့်ပါရစေနော်
June 13, 2011	ပုံတွေက အဲသည်လောက်ထိကြီး မရိုင်းပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့အဲသည်လောက်ထိကြီး ပြောကြတာလဲ။?
June 21, 2011	မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တာတော်ပါတယ် အခြားနာမယ်ထွက်တာလဲမရှိပါဘူး
July 18, 2011	ကျုပ်ကတော့ မှုတ်ပစ်ချင်တယ်
July 26, 2011	အင်းမယ်လိုဒီလိုစော်မျိုးကိုအရင်ဘာလုပ်မယ်မှတ်လဲသူ့ စောက်ဖုတ်ကိုအရင်မှုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဖင်ကိုပ်မှုတ်ပေးမယ်အင်းသူကိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးသူအားမရှိတော့တဲ့ အချိန်မှဖင်ကနေအရင်လိုးမယ်ပြီးမှစောက်ဖုတ်ကိုလိုးမယ်ပြီးရင်ဆက်မှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်စာရိုက်ရင်းတောင်တောင်လာပြီးအင်းမယ်လိုဒီကိုမှန်းထုတာနဲ့ တင်သူဗိုက်ကြီးလောက်ပြီအင်းလုပ်လို ပြ့ပြီးရင်တော့ပိုက်ဆံယူမှရမယ်ဒူးောညာင၈်
July 26, 2011	ဒူးောညာင်းခလေးဘာလေးပေါ့နော်
ဒါလေးကျန်ရစ်နေခဲံ့ မှာဆိုးလို့ ပါဟဲဟဲဒါပဲ
September 25, 2011	မကိုရရင် အသေရရ အရှင်ရရ လိုချင်တယ်?thiha798@gmail
October 5, 2011	နင်တို့တော်တော်ယုတ်မာကြပါလားနှမသားချင်းကိုယ်ချင်းမစာကြဘူး…တောက်…
November 1, 2011	အနုပညာကို အရမ်းအထင်ကြီးတယ် အမတို့မှာ လွတ်လပ်စွာနေတာကိုတောင် လူတွေကမကောင်းမြင်နေကြတယ် အမ အောင်မြင်မူပန်းတိုင်ကို ရောက်နှိင်ပါစေ
အကိုနေမင်းနဲ့ အမ နဲ့ အရမ်းလိုက်တယ်
February 26, 2012	max ဇော်ဇော် ချတော့ တစ်ည ဘယ်လောက်ယူလဲ…ငါကတော့ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ဖင်ချချင်တယ်.. ဘ်ာလောက်ပေးရမှာလဲ.
March 10, 2012	အားအားယာယားပေါက်က၇ေ၇ှက်ေ၇းနေကြတယ်ကွာ
March 12, 2012	ပုံတွေကအရမ်းလန်းတယ်ဗျာ..
March 24, 2012	ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး လို့ပဲအော်ရည်လိုက်ချင်တယ်သူငယ်ချင်းတို့ရယ် အော်လူ့ဘ၀ တယ်လည်းမလွယ်ပါလားနော်
March 30, 2012	ကဲ … ကဲ
သေဒဏ်နဲ ဖင်ခံ ဘယ်ဟာ
ကို အမရွေးမလဲ ပြော လီး ကတော့
နည်းနည်း ရှည်ပြီး ကြီးတယ်နော် ။
April 5, 2012	ငါလိုးမသားတွေမင်းတို့အမတွေကိုရော အထဲမှာကွန်မန့်ပေးတဲ့စော်တွေရော မယ်လိုဒီရောအကုန်လိုးချင်တယ်ဘယ်လိုလဲ
May 4, 2012	အဲဒါတွေရေနေလို့ ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကွာ လက်ညောင်တယ်ကွ ရေမနေနဲ့ ဘောဒါတို့
July 5, 2012	hihihi
July 27, 2012	မင်းတို့တော်တော်ယုတ်မာပါလားဆိုတဲ့ရင်ရင်နွယ်ကိုလိုးချင်တယ်
July 27, 2012	ရင်ရင်နွယ်ရေကုန်းခံချင်ရင်ဆက်သွယ်လိုက်နော်လိုးဖို့အသင့်စောင့်နေမယ်နော်
August 22, 2012	ပြောကြ မင်တိုမေတွေကိုဒီလိုပြောရင်ကြိုက်ကြမလား
September 8, 2012	the su aung
September 16, 2012	မြန်မာမှု ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါ မမိူးမိူး
September 27, 2012	အရမ်းကြည့်တော့ အရမ်းမိုက်ပါတယ်
October 12, 2012	ကောင်းတယ်နော်
မယ်လိုဒီ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ဖင်ကိုလိုးပြီး စောက်စိထဲကိုထည့်မယ်နော် လီးနဲ့
October 17, 2012	ဆုတောင်းကောင်းခဲ့လေသလားကွယ်
October 17, 2012	တို့မြန်မာလူမျိုးတွေ အထူးသဖြင့်ယောကျာ်းလေးတွေအရမ်းမိုက်ရိုင်းလာတယ်။နှမချင်းမစာနာကြတော့ဘူး။နင်တို့နှမကိုသူများကမကောင်းပြောရင်ခံနိုင်လား မသာကောင်ရဲ့
October 17, 2012	သူ့ မှာပါတဲ့ဟာ နင်တို့အမေနင်တို့အစ်မတွေဆီမှာလည်းပါတယ်။သူတို့ဆိုပိုနီးတယ်။ဒီလောက်တောင်ယားနေရင်သူတို့နဲ့ ဖြေလိုက်။ထောင်နေတဲ့အကြောကို
October 29, 2012	လိုးရမယ်ဆိုသိမ့်ကောင်းမယ်
December 8, 2012	အော်…လူတွေ…
December 8, 2012	နှမချင်းမစာမနာ…
December 8, 2012	ငါလီးတွေယားလာပြီ။
December 30, 2012	လှတယ်
December 30, 2012	အရမ်းမိုက်တယ်
December 30, 2012	hi အကယ်ဒမီပွဲမှာအရမ်းလှတယ်နော်
December 30, 2012	အမ မယ်လိုဒီ အကယ်ဒမီရလို့ အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်
December 30, 2012	ဝမ်းသာပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ် နောင်လည်းရပါစေ ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါ
December 30, 2012	အမဒီနေ့ဘာလို့ငိုတာလဲဟင် ပျော်လို့လားပြီးတော့
December 30, 2012	အကယ်ဒမီဆုရလို့ဝမ်းသာပါတယ်မမ ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေ
December 30, 2012	fb acoount.. heinhtet135@gmail.com
December 30, 2012	KO NAY ON DECEMBER 31,2012.At 1:16am. ဂုဏ်ယူပါတယ် ကွာ
Khin Aye Cho
December 31, 2012	အကယ်ဒမီဆု၇တာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်
December 31, 2012	အကယ်ဒမိဆု၇တဲ့အမအတွက်အ၇မ်းဝမ်းသာမိတယ်
January 1, 2013	နှမချင်းမစာမနာပြောတဲ့သူတွေမင်းတို့အမျိုးတွေဝဋ်ပြန်လည်လိမ့်မယ်။မယ်လိုဒီဂုဏ်ယူပါတယ်အကယ်ဒမီအတွက်။
January 2, 2013	အမ အကယ်ဒမီရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။
January 3, 2013	khine ဆိုတဲ့ကောင် မ နင် က melody အ ကြောင်း ဘယ်လောက်သိလို့လဲ။ သူ ကုန်းနေတာ ရန်ကုန်မှာလူ ဆုံနေပြီ ။မသိရင် မသိသလိုနေ ကြားထဲကဖင် ဝင် မယားနဲ့။ခပ် ရိုင်းရိုင်းပဲပြောလိုက်မယ် sponsor မျော်နေတဲ့ကောင် မ တွေကိုလူတိုင်း လိုးချ င် တာဘာဆန်း လဲ။ ဒါ ကိုနင် က သူများ အ မေ ။ နှမ တွေကိုထိခိုက် ပြီး ပြောနေရ အောင် သာမန်လူတွေက သူတို့လိုဖင် ခံစားနေတာမှ မဟုတ်တာ။နင် ကနာနေရ အောင် နင်ကော သူနဲ့တူတူ ဖါ လား။အေး ငါ့ ပြောတာ မယုံရင် ပန်းဘဲတန်း မှာငါ့ကိုလာရှာလိုက်။အဲ့ဒီ ဖါသယ်မကို ငါခေါ်ပြမယ်။ မှတ် ထားလိုက် ငါနာမယ် SZ
January 4, 2013	နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
January 10, 2013	ဒီလောက် မရိုင်းကြပါနဲ့ ကိုယ့်ဆရာတို့ရယ်
January 15, 2013	Khineဆိုတဲ့ဖအေလိုးမ..မင်းဖအေအလိုးခံနေရလို့နာပေးနေတာလား နာပေးချင်ရင်ဝရုံတောကိုလာခဲ့ နာအောင်းလုပ်ပေးမယ်……ကြိုက်တဲ့ဈေးတောင်း..ဒါပေမယ့်မင်းဟာကဂျန်ပန်လက်ကျန်ပဲဖြစ်မှာပါ..အင်းလေကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ပဲ…..
January 18, 2013	ရရင်တော့။။။။။။။။။။။။။။သာလဲပါချင်တယ်။။။။။။။။။။။။။။။။။
January 31, 2013	မယ်လိုဒီအလှကို အရမ်းကြိုက်တယ်
February 2, 2013	အရမ်းလှလို့ချစ်ချင်တယ်
February 4, 2013	မင်းရဲ့ပရိတ်ပါ မယ်လိုဒီကိုကြုက်ပါတယ်
February 4, 2013	မယ်လိုဒီ ရည်စားရှိလား ငါကတော့မင်းကိုကြိုက်သွားပြီ မင်းငါကိုပြန်ကြိုက်ပါလား ဒါပဲနော်
February 9, 2013	အော်အပုပ်ကောင်ရုပ်ဆောင်တာပဲလေ။သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာကို မနှစ်သက်ရင်လဲရင်ထဲမှာထားလိုက်ပေါ့။ကျွန်တော်လဲပုရိသတစ်ေ
ယာက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့နှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ရော ကိုယ့်ဝီစီကံကိုယ်ခံတဲ့။သိပ်ြေ
February 11, 2013	😁😜😝😝😒😌😭👿😪💜💚💔💔💗😡😨😡
February 15, 2013	ပုံတွေကအရမ်းလှတယ် အဲလောက်ကြီးထိဘာလို့ရိုင်းတာလဲဟ??????????
February 17, 2013	ညီမလေးရေဝဠ်တစ်မျိုးပဲနော်
February 19, 2013	အမ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
March 2, 2013	အရမ်း မမိုက်ရိုင်း ကြ ပါနဲ.
March 2, 2013	ကျိုးစာဘာအာပေးနေမယ်နော်..
March 7, 2013	တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်
March 8, 2013	အားပေးနေမယ်
March 16, 2013	ါ့်လ့လြါဘုညြူု
March 19, 2013	မယ်လိုဒီကိုအရမ်းသဘောကျတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် သိပ်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့တော်တော်လေးတူလို့ သူငယ်ချင်းလဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ် ရမယ်ဆို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ 0973085351
March 21, 2013	I like this website
March 28, 2013	လီးကိုပဲစုတ်ခိုင်းချင်လိုက်တာကွာ……..
March 29, 2013	မမသဘောအတိုင်းလိုးပေးမယ်အရမ်းလိုးချင်နေပြီ
April 4, 2013	ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောအားမငယ်နဲ့
April 9, 2013	မမမယ်လိုဒီရဲဇတ်ကားများကိုအရမ်းကြိုက်ပါသည်။
April 14, 2013	ခင်ချင်လို့ပါ … ကျွန်တော်က ရှမ်းပြည်ကလေ … ခင်လို့ရရင် အကောင့်ပြန်အက်ပေးပါနော် ….
May 3, 2013	မမယ်လိုဒီရေနှမချင်းမစာနာတဲ့ယောက်ကျားတွေကြောင့်မစိတ်မပျက်နဲ့နော်
May 3, 2013	မမယ်လိုဒီရေမကိုမတော်မတရားပြောတဲ့ယောက်ကျားတွေရဲ့ဟာကိုလေညီမ
May 29, 2013	အော် ၀ဋ်တစ်မျိုးပဲနော် သူတို့မှာ ညီမတွေမရှိကြလို့ ပြောနေတာ မယ်လိုဒီ ဘာပဲပြောပြော စိတ်မတိုနဲ့နော် သူတို့ ညောင်းသွားရင်မပြောတော့ဘူး
June 5, 2013	ရေးလို့ရပြီးလား
June 5, 2013	ကယ် ရေးပြီးနော် အမ မယ်လိုဒီ ရေ့တချို့လူတွေလုပ်တာနဲ့ အခြားလူအများထိခိုက်တယ် အမ မယ်လိုဒီတုိ့ သရုပ်ဆောင်လောကမပျောနဲ့ အပြင်လောကမှာလဲဒီလိုပဲ( တကယ်လုပ်တဲ့ သူတွေက အတော့ကိုစောက်ဆက် မရှိ လူပုံလယ်မှာ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးနေနေကြတယ် တကယ့် တကယ့်အဆက်မရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က မြင်းမတွေ) နိုင်ငံခြားမှာ အဲ့ဒီလို ဟိုပေါ်ဒီပေါ်ရိုပ်တာဟာ မင်းသမီ မင်းသား တွေမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဟာ(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ဖါသယ်မ တိုင်း ပြည် ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဖါသယ်မတွေဖြစ်မယ် )ဒါပဲပြောမယ်
June 5, 2013	အမ မယ်လိုဒီ ရေ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကောင်းတာတွေကော် မကောင်းတာကော် တော်တော်များများတွေ့တယ် မိန်းကလေးရဲ့ပုံစံကိုကြည့် ပြီး အပေါ်မှာရေးထားသလိုပြောဆိုတက် ကြတယ် ဒါပေမဲ့ တကယ်လုပ်တဲ့သူ ကတော့တမျိုး တကယ်မလုပ်တဲ့သူကြတော့ ခံရခက်တယ် ဝေဖန် ပြောဆိုတာ တော့လုပ်ပါ အပေါ်ကရေးထားတဲ့ စာအချို့က အတော့ကို ရိုင်းတယ် တကယ် လုပ်တဲ့သူတွေကို ပြောတာက အရသာရှိသလို အဓိပ္ပါယ်လည်း ရှိတယ် အဲ့တ ကယ်လုပ်တဲ့သူတွေကို ရေးခြင်သလိုရေး ပြောခြင်သလိုပြော ဆဲခြင်သလိုဆဲလို့ ရပါတယ် ကြိုက်သလိုလုပ်လို့လည်း ရတယ်
June 5, 2013	အမ ပရိပ်သက်ဖြစ်လို့ကာပြောတယ်လို့ တချို့မြင်မယ် ကျွန်တော်ကဝေဖန်စရာ ရှိရင် ဝေဖန်မယ် နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေမကောင်းရင် ခေါင်းတွေကိုဝေဖန် မယ် NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လက်ရှိအခြေနေမှာအဓိက ဝေဖန်ခြင်တယ် (အခုကလမ်းကျုံလို့ဝေဖန်တာပါ ဒီစာကိုဖက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တ ကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်) နိုနို
July 5, 2013	မင်းတို့အကုန်လုံးကိုယောက်ကျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လိုးမယ်ကွာလာမလား
July 8, 2013	မမကမောင်နောက်ကလိုက်ခဲ့နော်အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
July 14, 2013	ရှယ်ပဲနော်
August 19, 2013	နင့်ကိုငါ ကြိုက်တယ်ကြိုးစားပေါ့ညီမလေးရယ်
မယ်လိုဒီ | Myanmar Model Girls
August 26, 2013	[…] မယ်လိုဒီ […]
September 4, 2013	good
September 17, 2013	မယ်လိုဒီနဲ့မိတ်ဆက်ချင်တယ်
October 14, 2013	စောက်ရမ်းကောင်း
November 16, 2013	လှမှလှစောက်ဖုတ်ပါဖော်ထားလိုက်နော် ဒါဆိုပိုလှတယ်
November 26, 2013	လိုးချင်လို့ပါ။
December 3, 2013	ဖင်လိုးချင်တယ်
December 28, 2013	အရမ်းရမ်းလိုးချင်လိုက်တာ စောက်ဖုတ်တလှည့် ဖင်တလှည့် လိုးပြီးတော့ မယ်လိုဒီ ပါးစပ်ထဲ ငါ့ လီးရည်တွေထည့်ထားချင်လိုက်တာ
January 14, 2014	မယ်လိုဒီရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကို ငါ့ရဲ့ လီးကြီးထည့် ပြီးလီးရည်တွေထုတ်ချင်လိုက်တာ ဖင်လဲ လိုးချင်တယ်
January 23, 2014	လှပါတယ်.ဘာမမဝတ်ရင်ပိုတော်ငလ
February 9, 2014	အရမ်းလှတယ်
March 25, 2014	ဒေါ်မယ်လိုဒီမင်းအမျိုးသားရေတက်လိူင်းခန်းကကောင်ဘယ်မှာလဲ
March 27, 2014	ကျွန်တော်ကတော့မမမယ်လိုဒိကိုညာတာတဲ့သဘောနဲ့အရက်
fuckingလိုက်မယ် ပြိးရင်ဘိလပ်မြေနဲ့ ပိတ်ပြိးထားလိုက်မယ်
March 29, 2014	မင်းတိုတွေရေးချင်တိုင်းရေး ပြောချင်တိုင်းပြောပြိးနေနေတာ ငါလည်းငါ့ဘာသာဒိတိုင်းပဲနေနေတော့မယ်
October 11, 2014	ထာဝရျေပ်ာရွှင်ပါစေ
December 4, 2014	Minkha Larbar Maylod Kochittoe maylod Khachitmarlar,.!
December 5, 2014	Im Maylod Kochit Toe Thukha Chitmarlar <..Ahe Ayinheada,..!
December 7, 2014	Maylod Ko Chit Toe balo Look Yamay,.!
December 8, 2014	Maylod Kochitlo Thukha chitpamalar,.?
December 10, 2014	Aww Mima Detakhar Chitlikemay,..
December 10, 2014	INOVEYOU;MAMA
December 10, 2014	INOVEYOU’MAMA
December 12, 2014	Aww TayouktaysodoeNaga Khachitlikemay,.! Thuko,..
December 17, 2014	မမကီုအရမ်းချစ်တယ်“မမညီလေး
December 17, 2014	ဖုန်းနံပတ်ပေးပါနော်
December 17, 2014	ညီမလေးဖုန်း0947054682ပါ
December 18, 2014	မမ.ခင်ခွင့်ပေးပါနော်
December 28, 2014	Im Thukha Chit Fou Knowbarta,..
December 30, 2014	Aww Barlook Nay barlay,..
January 2, 2015	Im Atoelay Kolyin NayBoin Yabarta,..
January 8, 2015	Hello Barlook Nat barlay,.!
January 29, 2015	Im Min Kha Larbar Nat Know Barlar,..
March 10, 2015	ချစ်စရာလေး
May 25, 2015	hi hello goodmorning we’can,..
June 18, 2015	မေလိုဒီ ကို ညီညီ ဟော်တနေ့က လမ်းတလမ်းမှာတွေ့လိုက်ရတယ် အတော်လည်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ် နှော် ချစ်သူရှိပြီလား ။
August 17, 2015	hi hello noyknow gabarlar,..ha,..